Zuva: Ndira 7, 2020
New Generation Mobile Taxi Kufona System EnTaksi İzmir Yakatangwa
Nguva itsva mukufambisa kwetekisi yatanga mu inzmir. Chizvarwa chitsva chefoni mbozhanhare yekufona Achifambisa achienda kuguta rakangwara, İzmir akatora danho idzva mukufambisa kwega. [More ...]
Iyo 147-makore nhoroondo yeBaghdad Railway! Muzvinafundo Edward Mead Earle vakanyora mubhuku ravo ”1923 Ab kuti Abdulhamid II anodzivirira vatorwa kuti vagare munzira. Sekureva kwaProfesa Earle, II. Abdulhamit, mukucherechedzwa kwemamwe kodzero uye [More ...]
Balikesir Kiziksa Bridge OK: Balikesir Metropolitan Meya Yucel Yilmaz akachengeta vimbiso yake, Manyas County Manyas yakagadzirwa paKocasay, Gönen-Kızıksa Road Bridge Bridge Bridge yakapera. Balıkesir Metropolitan Municipality, [More ...]
TCDD ichazotora Vabatsiri veVanoongorora; 4 Mutevedzeri Whlolaongorora vachanyoreswa kuti vapihwe yekuongororesa Board of TCDD General Directorate. Iyo yekupinda bvunzo inotsanangurwa pazasi. Bvunzo Zuva uye Nguva: Yakanyorwa [More ...]
Smart Kupindirana Solution yeAntalya Urban Traic
Intelligent Kuparadzanisa Solution yeAntalya Urban Traffic: Turafiki inotsvedza uye yakawedzera hupfumi pamwe nekudyidzana kwakangwara. Antalya Metropolitan Municipality ndeimwe yemigwagwa yakanyanya kuwanda kuitira kuti mvura isafambe zvakanaka. [More ...]
EGİAD Trade Bridge Inobatanidza Bhizinesi
EGİAD Trade Bridge inoramba ichiisa muenzaniso kune bhizinesi. EGİAD - Aegean Vechidiki Bhizinesi People Association nhengo, inova imwe yezvinonyanya kutarisira Bhizinesi Networks (networking) yakagadzirwa kuti ishe uye kuwedzera [More ...]
CHP Istanbul mutevedzeri waMahmut Tanal, TCDD'de "kusarudzika kusarudzika kwekutengesa" kudenha kwaunza kuhurongwa hweGungano. Tanal akabvunza Gurukota rezvekutakura Mehmet Cahit Turhan kuti apindure mubvunzo "Ngoro nyowani dzakatemwa dzashandurwa kuva chakavezwa here? Tani." [More ...]
White paradhiso Pamukkale inoteverwa neiyo yechipiri chena paradhiso, iyo yeDenizli Ski Center, yakadirana vashanyi pakupera kwevhiki. Denizli Ski Center, ndiyo itsva inodiwa yevadi veki ski, inonyanya kufarirwa mitambo yechando. [More ...]
Dr. Tahir Büyükakın, Meya weMarmara Mizinda uye Kocaeli Metropolitan Municipality; Yalçın Eyigün uye nhume yake vakakurukura nezvechangobva kuitika kwaGebze Metro. Gebze Darıca [More ...]
Idea Marathon yeiyo Inofadza Izmir
İzmir Metropolitan Municipality uye Open Innovation Association vari kuronga zano marathon inonzi 11 Hack12Mobility İdeathon İzmir ta musi wa 4-10 Ndira. Chekupedzisira chikumbiro ndiNdira XNUMX. Izmir Metropolitan Municipality more [More ...]
Iyo Racked Nostalgic Tram Nyaya muDüzce
Sakarya Metropolitan Municipality's nostalgic tram projekiti yakaunza muchirongwa chirongwa chechisipiso tram chakabviswa mushure mekuiswa makore maviri muvakidzani wavo Düzce. Ndeipi yakanga isiri iyo sipo yeti tramgic? Medyabar akaiswa pasherufu mushure memakore maviri muDüzce [More ...]
Kumbira kubhadharwa kune asina kusimuka nhanho kuIstanbul Airport
Imwe chete yematanho mana eIstanbul Airport, iri kushanda, ichave yakabhadharwa nekuda kwevimbiso dzevatakuri mumatanho asina kusimuka. SözcüMaererano nenhau dzaBasak Kaya, CHP Kocaeli Mutevedzeri waHaydar [More ...]